कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: असहमतिको आतंक
आजभोलि ध्रुर्वे हात्तीको आतंक खुव चर्चा छ । हात्तीको नाम कसले ध्रुर्वे राख्यो त्यो पनि थाहा छैन । हात्तीको नामै नराख्दा पनि कुन हात्ती दयालु छ, कुन हात्ती मायालु छ र कुन हात्ती हरामी छ भनेर थाहा नहुन पनि सक्छ । तर मान्छेले राख्ने नाम पनि त्यो जनावरको राम्रो र नराम्रो बानीसँग जोडेर चर्चापरिचर्चा गर्दा त्यो नामसँग जोडिएकाहरुलाई कति चित्त दुख्छ होला, ख्याल गरेको पाइदैन । के एउटा ध्रुर्वे हात्ती हरामी भयो, गाउँलेलाई दुःख दियो, मान्छेलाई मा¥यो भन्दैमा सबै ध्रुर्वेहरु खराव हुन्छन् ? एउटा रोनाल्डो हात्तीले दुःख दियो भने सबै नामको रोनाल्डोलाई गाली गर्न पाउँछ ? यहाँ जङगलको हात्तीको आतंक भन्दा पनि राजनीतिमा असहमतिको आतंक मचाउने खतरनाक ध्रुर्वे, रोनाल्डोहरु कम छन ? असहमतिको आतंक के ध्रुर्वे हात्तीको भन्दा कम आंकलन गर्न मिल्छ ? त्यसैले होला, अव राजनीतिमा पनि ध्ूर्वे, रोनाल्डो आतंकसँग दाँज्न पुगेको अवस्था छ ।
नेपाली राजनीतिमा असहमतिको आतंक व्यापक बनेको छ । असहमतिको आतंकका कारण कुन मान्छे कुन धरापमा पर्ने हो थाहा छैन । कहिले, कहाँ चक्काजाम हुने हो, ठेगाना छैन । असहमतिको आतंकको कारण सुरक्षा मामिला कमजोर भइ कुन बेला कुन ठाउँमा महिला हिँसा हुने हो, थाहा छैन , जताततै असुरक्षा बढिरहेको छ । कुन ठाउँमा कस्को आतंक हुने हो, कुनै अनुमान गर्न सकेको छैन । जव जव राजनीतिमा दलहरुबीच असहमतिका खाडलहरु बढ्छन्, ।
जवजव असहमतिले सिमा नाघ्छ, तव तव हरेक क्षेत्रमा आतंकको वातावरण सिर्जना हुने गर्दछ । सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचारीको आतंक, विकास निर्माणमा कमिशनको आतंक, गल्लीगल्लीमा लुटको आतंक, राज्यमा नातावाद क्रिपावादको आतंक, मानव अधिकार हननको आतंक जस्ता देशमा आतंकै आतंकको अवस्था बनेको छ । बाटोमा कहिले गाडीको आतंक, कहिले घर भत्काउने आतंक भएकै छन् ।
कहिले भोज गर्नेहरुलाई करको आतंक, व्यापर व्यवसाय गर्नेहरुलाई करको आतंक, सहकारीहरुलाई अनुगमन र नियमनको आतंक मचाइरहेकै छन् । आखिर कुनै पनि कुरामा सहमतिबाट समस्याको समाधान गर्ने परम्परा भए दिएको भए ‘बनको बाघले खाओस् या नखाओस् मनको बाघले आतंक मच्चाउन पाउने छैन कि ?